Tag: fisoratana anarana webinar | Martech Zone
Tag: fisoratana anarana webinar
Raha misy indostria iray nipoaka tamin'ny fitomboana noho ny fameperana sy ny fanidiana ny dia, dia ny indostrian'ny hetsika an-tserasera. Na fihaonambe an-tserasera izany, fampisehoana fivarotana, webinar, fampiofanana ho an'ny mpanjifa, fampianarana an-tserasera, na fivoriana anatiny fotsiny… ny ankamaroan'ny orinasa dia tsy maintsy nanam-bola amin'ny vahaolana amin'ny kaonferansa. Paikady miditra no entin'ny webinar ankehitriny… saingy tsy tsotra araka ny fahitana azy. Ny filàna mampifangaro na mandrindra amin'ireo fantsom-barotra hafa,
Friday, May 31, 2013 Alahady Oktobra 4, 2015 Douglas Karr
Ireo olona tsara ao amin'ny ON24, mpamatsy vahaolana Webcasting, Virtual Event ary mpamatsy tranonkala Webinar, dia nanome fomba fijery lehibe momba ireo orinasa manao tranokala webinar. Tianay ireo tranonkala web eto Martech Zone ary miara-miasa amin'ny mpiara-miasa aminay izahay mba hampiroborobo sy hanatanteraka azy ireo. Ireto misy toro-hevitra 4 hanatsarana ny mpangataka Webcast anao Webcast manemotra fotoana. 64% no misoratra anarana amin'ny herinandro misy webinar mivantana. Ary ireo mpamokatra webcast dia tokony hanao fipoahana fampiroboroboana "day of event" foana